एकताले लियो नयाँ मोडेलः प्रचण्ड अध्यक्ष, महासचिव इश्‍वर पोखरेल तर अध्यक्ष सेरेमोनियल (पुरा हेर्नुहोस ) – पुरा पढ्नुहोस्……
एकताले लियो नयाँ मोडेलः प्रचण्ड अध्यक्ष, महासचिव इश्‍वर पोखरेल तर अध्यक्ष सेरेमोनियल (पुरा हेर्नुहोस )
काठमाडौं । नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको पार्टी एकतालाई टुंगोमा पुर्‍याउने तयारी भइरहेको छ । बन्‍‍दै गरेका प्रदेश सरकारमा माकेले पार्टीबाट मन्त्रीहरु नपठाएपछि एमालेलाई एकताको लागि थप दवाव परेको छ ।
गृहजिल्ला चितवन पुगेका माके अध्यक्ष प्रचण्डले पनि एमालेलाई चेतावनी दिँदै अाफू फड्‍को हान्‍न सक्ने बताएका थिए । माकेका केही नेताहरु र काँग्रेसका नेताहरुबीच भइरहेको वार्ताबारे जानकारी पाएपछि एमाले झन् झस्केको छ । एकतालाई अन्तिम रुप दिन नेताहरु अान्तरिक गृहकार्यमा जुटेका छन् ।
एमाले-माकेको चुनावी तालमेल हुँदै एकताको लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले नयाँ प्रस्ताव ओलीसमक्ष राखेका छन् । गौतमले अध्यक्ष नपाएसम्म प्रचण्ड एकतामा नअाउने निष्कर्ष निकाल्दै एकताको लागि सक्रिय भएका छन् ।
उपाध्यक्ष गौतमले माओवादी केन्द्रलाई अध्यक्ष र एमालेलाई महासचिव दिनेगरी एकताको नयाँ प्रस्ताव पेश गरेका छन् । गौतमले तयार गरेको प्रस्तावमा अध्‍यक्ष सेरेमोनियल हुने र महासचिव कार्यकारी हुने बताइएको छ ।
यो एकता तत्कालिन माले र मार्क्सवादीबीच भएको जस्तै बनाउने गौतम लागिपरेका छन् । २०४७ को भएको एकीकरणमा महासचिव मदन भण्डारीलाई शक्तिशाली बनाएको थियो भने अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीलाई सेरेमोनियल बनाएको थियो । भण्डारी मालेबाट र अधिकारी मार्क्सवादीबाट एकताको नेतृत्व गरेका थिए । त्यति बेला तुलनात्मक रुपमा माले बलियो थियो ।
गौतमको प्रस्तावले प्रचण्डलाई मोनमोहन अधिकारी बनाउनेछ । त्यसैगरी गौतमले माधव नेपाल र झलनाथ खनालमध्ये एक जनालाई राष्ट्रपति बनाउने र एमाले महासचिव इश्‍वर पोखरेललाई मदन भण्डारी बनाउने छ ।
गौतमको नयाँ प्रस्तावबारे ओली र प्रचण्डले औपचारिक रुपमा धारणा बनाएका छैनन् । प्रचण्ड चितवनबाट अाज काठमाडौं अाउँदैछन् ।
यसैबीच एकताको टुंगो नलागेपछि नेपाली काँग्रेसले प्रचण्डलाई अाफूतिर तान्‍ने अन्तिम प्रयास गरिरहेको छ । उसले अाफ्नो समर्थनमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने खेल पनि सुरु गरेको छ । काग्रेसका केही नेताहरुले माकेका नेताहरुलाई गोप्य रुपमा भेटवार्ता गरेको समेत बताइएको छ ।
पार्टी सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा निकट नेताहरुले अाफ्नो पार्टीलाई राष्ट्रपति दिएर प्रचण्डलाई पाँच वर्षको लागि प्रधानमन्त्री बन्‍न अाग्रह गरिरहेका छन् ।
यो समाचार हामीले अनलाइनडबलीबाट साभार गरेका हौ |
Prevपत्रकार रवि लामिछानेका बारेमा नकारात्मकबोल्ने‘दिल निशानी मगरका लागी निकै महगो साबित ..
Nextईराकबाट उद्दारगरि फर्केकी नेपाली चेलीको कहालीलाग्दो पिडा :सेनेटेरी प्याडमा टिकट लुकाएर नैरोबी जाने भन्दै इराक पठायो ! आफै मर्छु कि झैँ लागेर नेपालीलाई उद्दार गरिदिनु भन्दा महिनाको एक रात सुत्नु पर्छ भने ! हेर्नुहोस भिडियोमा
२४ वर्षीया सुन्दरीको ५० नाघिसके सलमानकासँग बिहे गर्ने चाहना – आखिर को हून यी सूदरी हेर्नूहोस
राजासंग कहिले नझुक्ने रबिन्द्र अधिकारी, यस्तो थियो सम्बन्ध, ३ दिन अगाडि नै संकेत दिएका रहेछन, धमलाले खुलाए सब कुरा-हेर्नुहोस (भिडियो सहित)
टिकाथली भुतकाण्डमा सामाजीक संजालमा भाइरल भएका धामीले दर्शकलाई दिए यस्तो कडा जवाफ ? हेर्नुहोस भिडियो